ढ’ल्किदो उमेरमा पनि निकै ‘बो’ल्ड’ छिन् पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी, हेरौं तस्विर – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ताढ’ल्किदो उमेरमा पनि निकै ‘बो’ल्ड’ छिन् पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी, हेरौं तस्विर
उक्त तस्वीरमा उनको हातमा भएको टा’टु स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ ।उषा खड्गी सातौँ मिस नेपाल हुन्। सन् २००० मा आयोजना भएको मिस नेपाल नामक प्र’तियोगिता जि’तेकी थिइन्। उषा सन् १९९९ मा मिस पोखराको पहिलो उ’प वि’जेता थि’इन् र पछि उनले सन् २००० मा मिस बीरगञ्ज भा’ग लिँदै पहिलो उप वि’जेता भएकी थिइन् । उनको विवाह नेपाल टेलिभिजनको पूर्व कार्यक्रम प्रस्तोता जिपि ति’मिल्सिनासँग भएको थियो भने उनीबाट मा’न-सिक या’त-ना दिएको भन्दै उनले स’म्बन्ध बि’च्छेद ग’रेकी थिइन्।
वीरगञ्ज निवासी उत्तमबहादुर खड्गी र उर्मिला खड्गीकी सुपुत्री उषाले सन् १९९९मा पोखरा सु’न्दरी प्रतियोगितामा भाग लिई प्रथम उप-विजेताको उ’पाधी हा’सिल गरेकी थिइन्। तीन दिदी-बहिनी र एक भाइहरूमध्ये जेठी उषाले प्रवेशिका परीक्षा वीरगञ्ज क’न्या माध्यमिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। हरिखेतान महिला बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्जबाट आई.ए. उत्तीर्ण भएकी उषा मिस नेपाल हुँदा सोही क्याम्पसमा बी.ए. (प्रथम वर्ष)मा अ’ध्ययनरत थिइन्। १९ वर्ष अगाडि एनटिभी प्लस कार्यक्रममा उषा र जिपीको भेट भएको थियो ।
म्यूजिक भिडियोमा मलिकाको पारिश्रमिक एक लाख माथि
अहिलेको संघियता भन्दा पाच बिकाश क्षेत्र सहि थियो…. प्रकाण्ड
कमाउन साउदी गएका छिरिङ्ग बाकसमा फर्किए, सम्हालिन सकिनन श्रीमती, बाबाआमाको यस्तो हालत (भिडियो)
छोरी जन्मिएपछि पहिलोपटक मिडियामा आइन् चर्चित लोक गायिका शान्ति श्री परियार (भिडियो सहित)